May 2020 - Page2of 45 - ShwengweGames
စမျးခြောငျးတောငျရပျကှကျ၊ နန်ဒဝနျလမျးတှငျ (၄)ထပျတိုကျပွိုကမြှု ဖွဈပှား
၃၀-၅-၂၀၂၀ ရကျနေ့၊ (၂၀:၅၅) အခြိနျခနျ့ စမျးခြောငျးမွို့နယျ၊ စမျးခြောငျးတောငျရပျကှကျ၊ နန်ဒဝနျလမျးတှငျ (၄) ထပျတိုကျပွိုကမြှု ဖွဈပှားကွောငျးသတငျးရရှိသဖွငျ့ စမျးခြောငျးမွို့နယျမီးသတျစခနျးမှ ရှာဖှကေယျဆယျရေးယာဉျ(၁)စီး ထှကျခှာလကျြရှိပါသညျ။
(၂၁:၀၂)အခြိနျတှငျ ကြား(၁)ဦး၊ မ(၁)ဦး၊ ကလေး(၁)ဦး ကယျဆယျခဲ့ပွီး ဆကျလကျ၍ ရှာဖှကေယျဆယျရေးလုပျငနျးမြား ဆောငျရှကျခဲ့ပါသညျ။
စမ်းချောင်းတောင်ရပ်ကွက်၊ နန္ဒဝန်လမ်းတွင် (၄)ထပ်တိုက်ပြိုကျမှု ဖြစ်ပွား
၃၀-၅-၂၀၂၀ ရက်နေ့၊ (၂၀:၅၅) အချိန်ခန့် စမ်းချောင်းမြို့နယ်၊ စမ်းချောင်းတောင်ရပ်ကွက်၊ နန္ဒဝန်လမ်းတွင် (၄) ထပ်တိုက်ပြိုကျမှု ဖြစ်ပွားကြောင်းသတင်းရရှိသဖြင့် စမ်းချောင်းမြို့နယ်မီးသတ်စခန်းမှ ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးယာဉ်(၁)စီး ထွက်ခွာလျက်ရှိပါသည်။
(၂၁:၀၂)အချိန်တွင် ကျား(၁)ဦး၊ မ(၁)ဦး၊ ကလေး(၁)ဦး ကယ်ဆယ်ခဲ့ပြီး ဆက်လက်၍ ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။
ကိုယျ့ဘဝကိုယျ ခဈြခငျလာဖို့ နညျးလမျး (၁၀) ခု
လကျရှိ ကိုယျ့ဘဝကို အားမရလို့ စိတျ ကုနျနတေဲ့ အခါ ဒီပို့ကိုဖတျကွညျ့လိုကျ ပါ။
သူတို့ဘဝကိုသူတို့မုနျးတယျဆိုတဲ့လူတှေ ရှိပါတယျ။သူတို့ဟာသူတို့မှာရှိနတေဲ့အရာတှနေဲ့ မပြျောရှငျနိုငျကွပါဘူး။
အကယျ၍သငျလညျးအဲလိုပဲဖွဈခဲ့မယျဆိုရငျသငျဟာ- ခမျြးသာမှ၊အောငျမွငျမှ၊မိတျဆှအေပေါငျးအသငျးတှအေမြားကွီးရမှ၊ နာမညျကြျောကွားမှ၊ပွီးပွညျ့စုံတဲ့ မိသားစုရှိမှပြျောရှငျမယျဆိုတဲ့လူတှထေဲကတဈယောကျဖွဈနပေါလိမျ့မယျ။
စိတျမကောငျးစရာပါပဲ။အဲလိုဆိုရငျတော့ မှားနပေါပွီ။နောကျတဈကွိမျ “ ငါ့ဘဝကိုငါမုနျးတယျ ”လို့ပွောတဲ့အခါသငျ့ကိုယျသငျမေးကွညျ့ပါဦး။ဒါဆိုငါသရေငျပိုကောငျးမလား-လို့။
ဒီစကားကကွမျးတမျးခငျြကွမျးတမျးလိမျ့မယျ။ဒါပမေဲ့တှေးရုံလေးပဲတှေးကွညျ့လိုကျပါသငျအသကျရှငျနသေမြှ သငျဟာပြျောရှငျနိုငျပါတယျ။ပွီးတော့ဘဝကိုပိုကောငျးအောငျလုပျနိုငျတဲ့ အခှငျ့အရေးလညျးအမွဲတမျးရှိပါတယျ။
၁။ ဘဝရဲ့ကောငျးတဲ့အရာတှအေပျေါမှာ အာရုံစိုကျလိုကျပါ
ဘဝနဲ့ပတျသကျလို့ကောငျးတဲ့အရာတှကေိုတဈခုမှမစဉျးစားနိုငျဘူးဆိုရငျတော့ သငျ့မှာအဆိုးမွငျအတှေးတှရှေိနဆေဲပဲ။ အဲဒီအတှေးတှကေိုထှကျသှားခှငျ့ ပေး လိုကျပါ။သငျ့ဘဝရဲ့ဘယျအရာတှကေို သငျတကယျမွတျနိုးသလဲ?
ဘဝကိုသငျမခဈြဘူးဆိုရငျတောငျမှ အဲဒါကိုတဈခြိနျလုံးပွောနဖေို့မလိုပါဘူး။ သငျ့ဘဝကိုသငျမခဈြဘူးလို့ပွောလလေေ၊ အဲဒီအနှုတျလက်ခဏာအတှေးတှကေပိုအားကောငျးလာလလေပေါပဲ။
သငျ့ရဲ့ဘဝဟာတခွားတဈယောကျ ယောကျရဲ့ဘဝနဲ့ဘယျတော့မှတဈသမတျတညျးမတူနိုငျပါဘူး။ကိုယျမတတျနိုငျတဲ့အဝတျအစားဝတျတဲ့သူတှေ၊ ကိုယျမစီးနိုငျတဲ့ကားစီးတဲ့သူတှေ၊ကိုယျမနနေိုငျတဲ့အိမျမြိုးမှာနသေူတှကေတော့ ကိုယျ့အနားမှာအမွဲတမျးရှိနမှောပါပဲ။
ဒါကိုကငျြ့သားရအောငျလုပျပါ။နသေားကသြှားပွီဆိုရငျတော့ဘာမှပွဿနာမရှိတော့ပါဘူး။တခွားတဈယောကျယောကျရဲ့အောငျ မွငျမှုကိုသငျ့ကိုယျပိုငျအောငျမွငျမှုရရှိဖို့အတှကျတှနျးအားတဈခုအဖွဈအသုံးခနြိုငျပါတယျ။ဒါပမေဲ့ သငျ့မှာမရှိတဲ့အရာတှအေတှကျတော့ ဘယျတော့မှစိတျမကောငျးမဖွဈပါနဲ့။
သငျ့မှာအလုပျကောငျးကောငျးမရလို့၊ဒါမှမဟုတျငှရေေးကွေးရေးကသငျမြှျောမှနျးထားသလကျေအဆငျမပွလေို့ စိတျဓာတျကနြတေယျဆိုရငျသငျ့ရဲ့ လကျရှိအခွအေနဟောအခွအေနတေဈခုမြှသာဖွဈတယျလို့လကျခံပါ။အရာအားလုံးဟာပွောငျးလဲကွပါတယျ။
အခွားသူတှကေိုမြားမြားကူညီလေ၊ သငျ့ရဲ့ဘဝနဲ့ပတျသကျလို့ ညညျးတှားနဖေို့အခြိနျမရလပေါပဲ။ဒါတငျမကပါဘူး၊ လူတှကေိုကူညီခွငျးကသငျ့ကိုတကယျပဲ ပြျောရှငျစနေိုငျပါတယျ။
ကွျောငွာတှရေဲ့အလုပျက – သငျ့ဘဝဟာမပွညျ့စုံဘူး၊ဒါပမေဲ့အဲဒါကို ကောငျး မှနျအောငျပွုလုပျနိုငျတယျ၊အဲလိုပွုလုပျဖို့သူတို့ရဲ့နောကျဆုံးပျေါ အဝတျအစားတှေ၊အသုံးအဆောငျတှေ၊ကားတှကေိုဝယျရမယျလို့သငျ့ကိုပွောဖို့ပါပဲ။အဲဒီအလိမျ အညာတှကေိုလကျမခံမိပါစနေဲ့။
ဘဘာဝလောကကွီးကိုအသအေခြာကွညျ့ဖူးပါသလား။မိုး ကောငျးကငျ ၊တိရစ်တာနျလေးတှေ၊အပငျတှနေဲ့ မွဈခြောငျးတှေ။ဒါတှဟောတကယျကိုလှပပါတယျ။အဲဒါတှကေိုရှာဖှကွေညျ့ပါ။ပွီးတော့ ဘဝကိုသူ့အရှိအတိုငျးခဈြမွတျနိုးတတျအောငျသငျယူပါ။
အခုသငျ့မှာအခှငျ့အရေးရှိပါသေးတယျ- ဘဝရဲ့ကောငျးတဲ့အရာတှကေိုရှာဖှပေါ၊ ပြျောရှငျပါ၊ပွီးတော့ဘဝကိုခဈြမွတျနိုးပါ။
ကိုယ့်ဘဝကိုယ် ချစ်ခင်လာဖို့ နည်းလမ်း (၁၀) ခု
သူတို့ဘဝကိုသူတို့မုန်းတယ်ဆိုတဲ့လူတွေ ရှိပါတယ်။သူတို့ဟာသူတို့မှာရှိနေတဲ့အရာတွေနဲ့ မပျော်ရွှင်နိုင်ကြပါဘူး။
အကယ်၍သင်လည်းအဲလိုပဲဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်သင်ဟာ- ချမ်းသာမှ၊အောင်မြင်မှ၊ မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေအများကြီးရမှ၊ နာမည်ကျော်ကြားမှ၊ပြီးပြည့်စုံတဲ့ မိသားစုရှိမှပျော်ရွှင်မယ်ဆိုတဲ့လူတွေထဲကတစ်ယောက်ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။
စိတ်မကောင်းစရာပါပဲ။အဲလိုဆိုရင်တော့ မှားနေပါပြီ။နောက်တစ်ကြိမ် “ငါ့ဘဝကိုငါမုန်းတယ် ” လို့ပြောတဲ့အခါသင့်ကိုယ်သင်မေးကြည့်ပါဦး။ဒါဆိုငါသေရင်ပိုကောင်းမလား-လို့။
ဒီစကားကကြမ်းတမ်းချင်ကြမ်းတမ်းလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့တွေးရုံလေးပဲတွေးကြည့်လိုက်ပါသင်အသက်ရှင်နေသမျှ သင်ဟာပျော်ရွှင်နိုင်ပါတယ်။ပြီးတော့ ဘဝကိုပိုကောင်းအောင်လုပ်နိုင်တဲ့ အခွင့်အရေးလည်းအမြဲတမ်းရှိပါတယ်။
၁။ ဘဝရဲ့ကောင်းတဲ့အရာတွေအပေါ်မှာ အာရုံစိုက်လိုက်ပါ
ဘဝနဲ့ပတ်သက်လို့ကောင်းတဲ့အရာတွေကိုတစ်ခုမှမစဉ်းစားနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ သင့်မှာအဆိုးမြင်အတွေးတွေရှိနေဆဲပဲ။ အဲဒီအတွေးတွေကိုထွက်သွားခွင့် ပေး လိုက်ပါ။သင့်ဘဝရဲ့ဘယ်အရာတွေကို သင်တကယ်မြတ်နိုးသလဲ?
ဘဝကိုသင်မချစ်ဘူးဆိုရင်တောင်မှ အဲဒါကိုတစ်ချိန်လုံးပြောနေဖို့မလိုပါဘူး။သင့်ဘဝကိုသင်မချစ်ဘူးလို့ပြောလေလေ၊ အဲဒီအနှုတ်လက္ခဏာအတွေးတွေကပိုအားကောင်းလာလေလေပါပဲ။
၃။ သင့်ရဲ့ဘဝကို အခြားသူတွေနဲ့ မနှိုင်းယှဉ်ပါနဲ့
သင့်ရဲ့ဘဝဟာတခြားတစ်ယောက် ယောက်ရဲ့ဘဝနဲ့ဘယ်တော့မှတစ်သမတ်တည်းမတူနိုင်ပါဘူး။ကိုယ်မတတ်နိုင်တဲ့အဝတ်အစားဝတ်တဲ့သူတွေ၊ကိုယ်မစီးနိုင်တဲ့ကားစီးတဲ့သူတွေ၊ကိုယ်မနေနိုင်တဲ့အိမ်မျိုးမှာနေသူတွေကတော့ ကိုယ့်အနားမှာအမြဲတမ်းရှိနေမှာပါပဲ။
ဒါကိုကျင့်သားရအောင်လုပ်ပါ။နေသားကျသွားပြီဆိုရင်တော့ဘာမှ ပြ ဿနာမရှိတော့ပါဘူး။တခြားတစ် ယောက်ယောက်ရဲ့အောင်မြင်မှုကိုသင့်ကိုယ်ပိုင် အောင်မြင်မှုရရှိဖို့အတွက်တွန်းအားတစ်ခုအဖြစ်အသုံးချနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ သင့်မှာမရှိတဲ့အရာတွေအတွက်တော့ ဘယ် တော့မှစိတ်မကောင်းမဖြစ်ပါနဲ့။
၄။ သင်တကယ် ချစ်မြတ်နိုးတဲ့ အရာတွေကို ပိုလုပ်ပါ။
သင့်ကိုပျော်ရွှင်စေမယ့်အလုပ်တစ်ခုခုကို အနည်းဆုံးတစ်ခုလောက်ဖြစ်ဖြစ် နေ့တိုင်းလုပ်ပါ။
သင့်မှာအလုပ်ကောင်းကောင်းမရလို့၊ဒါမှမဟုတ်ငွေရေးကြေးရေးကသင်မျှော်မှန်းထားသလေက်အဆင်မပြေလို့ စိတ်ဓာတ်ကျနေတယ်ဆိုရင်သင့်ရဲ့ လက်ရှိအခြေအနေဟာအခြေအနေတစ်ခုမျှသာဖြစ်တယ်လို့လက်ခံပါ။အရာအားလုံးဟာပြောင်းလဲကြပါတယ်။
၆။ အကောင်းမြင်တတ်သူတွေနဲ့ ပေါင်းသင်းပါ။
သင်အမြဲပေါင်းသင်းနေတဲ့သူတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ဂရုစိုက်ပါ။ပျော်ရွှင်တဲ့သူတွေ၊အကောင်းမြင်တတ်သူတွေနဲ့ ပေါင်းသင်းမယ်ဆိုရင်သင်လည်းပိုပြီးပျော်ရွှင်လာပါလိမ့်မယ်။အကယ်၍သင့်အပေါင်းအသင်းတွေဟာအဆိုးမြင်တတ်သူတွေဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်တော့အဲဒီအတွေးတွေဟာသင့်ကိုလည်းလွှမ်းမိုးလာနိုင်တယ်ဆိုတာဂရုပြုပါ။
အခြားသူတွေကိုများများကူညီလေ၊ သင့်ရဲ့ဘဝနဲ့ပတ်သက်လို့ ညည်းတွားနေဖို့ အချိန်မရလေပါပဲ။ဒါတင်မကပါဘူး၊ လူတွေကိုကူညီခြင်းကသင့်ကိုတကယ်ပဲ ပျော်ရွှင်စေနိုင်ပါတယ်။
၈။ TV သိပ်မကြည့်ပါနဲ့။
ကြော်ငြာတွေရဲ့အလုပ်က – သင့်ဘဝဟာမပြည့်စုံဘူး၊ဒါပေမဲ့အဲဒါကို ကောင်း မွန်အောင်ပြုလုပ်နိုင်တယ်၊အဲလိုပြုလုပ်ဖို့သူတို့ရဲ့နောက်ဆုံးပေါ် အဝတ်အစားတွေ၊အသုံးအဆောင်တွေ၊ကားတွေကိုဝယ်ရမယ်လို့သင့်ကိုပြောဖို့ပါပဲ။အဲဒီအလိမ် အညာတွေကိုလက်မခံမိပါစေနဲ့။
၉။ သေးငယ်တဲ့ အရာလေးတွေအပေါ်မှာ တန်ဖိုးထားတတ်လာပါစေ။
ဘဘာဝလောကကြီးကိုအသေအချာ ကြည့်ဖူးပါသလား။မိုးကောင်းကင် ၊တိရစ္တာန်လေးတွေ၊အပင်တွေနဲ့ မြစ်ချောင်းတွေ။ဒါတွေဟာတကယ်ကိုလှပပါတယ်။ အဲဒါတွေကိုရှာဖွေကြည့်ပါ။ပြီးတော့ ဘဝကိုသူ့အရှိအတိုင်းချစ်မြတ်နိုးတတ်အောင်သင်ယူပါ။
၁၀။ ဘဝရဲ့သာယာပျော်ရွှင်မှုတွေ၊ အခွင့်အရေးတွေကို ရယူပါ။
အခုသင့်မှာအခွင့်အရေးရှိပါသေးတယ်- ဘဝရဲ့ကောင်းတဲ့အရာတွေကိုရှာဖွေပါ၊ ပျော်ရွှင်ပါ၊ပြီးတော့ဘဝကိုချစ်မြတ်နိုးပါ။
အိမျတှငျးမှာထားရငျ ကံကောငျးစတေယျလို့ ယုံကွညျထားတဲ့ အရာ(၇)မြိုး
အိမျတှငျးမှာ ရိုးရှငျးတဲ့ ပစ်စညျးလေးတှကေိုသုံးပွီးကောငျးတဲ့စှမျးအငျတှေ ပိုတိုးလာအောငျ၊အညံ့တှလြေော့အောငျ လုပျလို့ရပါတယျ။အခုပွောပွမယျ့နညျးလမျးက ဗဒေငျ၊ ယတွာ၊အဆောငျလကျဖှဲ့ မဟုတျပါဘူး။ နိုငျငံအသီးသီးရဲ့ဓလထေုံ့းတမျးတှမှောကံကောငျးစတေယျလို့ ယုံကွညျထားကွတဲ့ပစ်စညျးတှပေဲဖွဈပါတယျ။
တရုတျရိုးရာနညျးလမျးတှထေဲကအရိုးရှငျးဆုံးနဲ့ အခွခေံအကဆြုံးတဈခုကတော့အိမျတှငျးမှာသဈသား၊ ရေ၊ သတ်တု၊ မွကွေီး၊ မီးစတဲ့ဓာတျ(၅)မြိုးကို ထားရှိခွငျးပါပဲ။တရုတျသမားတျောကွီးတှရေဲ့အဆိုအရသဈသား(သို့မဟုတျ) ရကေို အိမျရဲ့ဘဏ်ဍာရှိတဲ့နရောမှာထားရငျ ပိုပွီးအကြိုးဖွဈထှနျးစပေါတယျ။
ဗုဒ်ဓဘာသာမှာရောဟငျဒူဘာသာမှာပါ ဆငျကိုအထှဋျအမွတျထားကွပါတယျ။ ဆငျသင်ျကတေကိုအမြိုးမြိုးသော ကံ ကောငျးခွငျးတှအေတှကျသုံးကွပါတယျ။ နောကျပွီးဆငျရဲ့ကိုယျအနဟေနျထား၊ အသှငျအပွငျပျေါမူတညျပွီးတော့လညျး အကြိုးပေးကှာခွားတယျလို့ ဆိုကွပါတယျ။ ဥပမာ – ဆငျနှာမောငျးကအပျေါမွှောကျနတေဲ့ပုံစံဆိုရငျကံကောငျးခွငျးတှဖေိတျချေါတဲ့သဘောမြိုးဆောငျပါတယျ။
အိုငျးရဈချြလူမြိုးတှရေဲ့အယူအဆမှာ မွငျးခှာကိုကံကောငျးခွငျးအဖွဈ သတျ မှတျကွပါတယျ။အခြို့ကလညျးမွငျးခှာဟာမကောငျးဆိုးဝါးရနျကကာကှယျပေးတယျလို့ ဆိုကွပါတယျ။အိမျရှတေံ့ခါး ပေါကျရဲ့အပျေါမှာသံမွငျးခှာကိုထားခွငျးကအိမျကိုအကာအကှယျဖွဈစပေါတယျ။
တရုတျဓလထေုံ့းစံအခြို့မှာလိပျသင်ျကေ တဟာအိမျရဲ့အစောငျ့အရှောကျဖွဈတယျလို့ယုံကွညျထားကွပါတယျ။ပွောရမယျဆိုရငျလိပျဟာတရုတျ Feng Shui ဂိုဏျးတှရေဲ့အစောငျ့အရှောကျတှထေဲက တဈခုလညျးဖွဈပါတယျ။လိပျကို ခှနျအားကွီးမားတဲ့ သင်ျကတေအဖွဈသတျမှတျထားကွတာပါ။လိပျအစဈဖွဈစေ၊ အတုဖွဈစအေိမျရဲ့ ရှတေံ့ခါး၊ နောကျတံခါးတှမှောထားခွငျးကအိမျကိုအညံ့တှကေ ကာကှယျပေးပွီး၊ကံကောငျးခွငျးတှကေို ဝငျလာစပေါတယျ။
ကမ်ဘာတဈဝှမျးကနိုငျငံအတျောမြားမြားရဲ့ ဓလထေုံ့းစံမှာအနီကိုကံကောငျးစတေဲ့အရောငျအဖွဈသတျမှတျထားကွပါတယျ။တရုတျနှဈသဈကူးဆိုရင အနီရောငျတှနေဲ့အလှဆငျကွပွီးအနျဘောငျးကိုလညျးအနီရောငျအိတျနဲ့ ထညျ့ပေးကွပါတယျ။အိန်ဒိယမှာလညျးမင်ျဂလာပှဲဆိုရငျ သတို့သမီးတျောတျောမြားမြားဟာ သနျ့စငျခွငျးနဲ့ကံကောငျးခွငျးသင်ျကတေအဖွဈအနီရောငျဝတျစုံကိုဝတျဆငျကွပါတယျ။ဒါကွောငျ့သငျ့အိမျမှာအနီရောငျပနျးအိုး၊အနီရောငျခြိတျ၊အနီရောငျကျောဇောကိုထားခွငျးကကံကောငျးခွငျးတှတေိုးပှားစနေိုငျပါတယျ။
ဝကျသင်ျကတေကိုကံကောငျးခွငျးအဖွဈ မှတျယူတာကဂြာမနျလူမြိုးတှပေါ။ဒီအယူကတော့ ဘာသာရေး အယူမဟုတျပါဘူး။သမိုငျးကွောငျးအယူပါ။အလယျ ခတျေလောကျကတညျးကဥရောပနိုငျငံတှမှောဝကျသင်ျကတေဟာခမျြးသာကွှယျဝခွငျးနဲ့ ကံကောငျးခွငျးအဆောငျအဖွဈယုံကွညျထားကွတာပါ။ဝကျမှေးပွီဆိုရငျခမျြးသာလာတော့မယျဆိုတဲ့ နိမိတျပါပဲတဲ့။အခွားသော ကြှဲ၊ နှား၊ ကွကျတှနေဲ့ စမျးသပျကွညျ့ပမေယျ့ အလုပျမဖွဈခဲ့ပါဘူး။ဝကျကသာ ကံကောငျးစခေဲ့တာကွောငျ့ယနတေို့ငျ ဝကျသင်ျကတောကို ကံကောငျးခွငျးအဖွဈ သတျမှတျထားကွတာပါ။
စကငျဒနဗေီးယားနိငျငံတှမှော ဝကျ သဈခသြီးတှကေိုပနျးကနျလုံးထဲထညျ့ပွီး (သို့မဟုတျ)ပွတငျးပေါကျမှာခြိတျဆှဲပွီး အလှဆငျတာကအိမျကိုအကာအကှယျဖွဈစတေယျလို့ယုံကွညျကွပါတယျ။ သငျလညျးကံကောငျးခငျြတယျဆိုရငျတော့အိမျမှာဝကျသဈခသြီးတှနေဲ့အလှဆငျထားလိုကျပါ။
အိမ်တွင်းမှာထားရင် ကံကောင်းစေတယ်လို့ ယုံကြည်ထားတဲ့ အရာ(၇)မျိုး
အိမ်တွင်းမှာ ရိုးရှင်းတဲ့ ပစ္စည်းလေးတွေကိုသုံးပြီးကောင်းတဲ့စွမ်းအင်တွေ ပိုတိုးလာအောင်၊အညံ့တွေလျော့အောင် လုပ်လို့ရပါတယ်။အခုပြောပြမယ့်နည်းလမ်းက ဗေဒင်၊ ယတြာ၊အဆောင်လက်ဖွဲ့ မဟုတ်ပါဘူး။ နိုင်ငံအသီးသီးရဲ့ဓလေ့ထုံးတမ်းတွေမှာကံကောင်းစေတယ်လို့ ယုံကြည်ထားကြတဲ့ပစ္စည်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။
တရုတ်ရိုးရာနည်းလမ်းတွေထဲကအရိုးရှင်းဆုံးနဲ့ အခြေခံအကျဆုံးတစ်ခုကတော့အိမ်တွင်းမှာသစ်သား၊ ရေ၊ သတ္တု၊ မြေကြီး၊ မီးစတဲ့ဓာတ်(၅)မျိုးကို ထားရှိခြင်းပါပဲ။တရုတ်သမားတော်ကြီးတွေရဲ့အဆိုအရသစ်သား(သို့မဟုတ်) ရေကို အိမ်ရဲ့ဘဏ္ဍာရှိတဲ့နေရာမှာထားရင် ပိုပြီးအကျိုးဖြစ်ထွန်းစေပါတယ်။
ဗုဒ္ဓဘာသာမှာရောဟင်ဒူဘာသာမှာပါ ဆင်ကိုအထွဋ်အမြတ်ထားကြပါတယ်။ ဆင်သင်္ကေတကိုအမျိုးမျိုးသော ကံ ကောင်းခြင်းတွေအတွက်သုံးကြပါတယ်။ နောက်ပြီးဆင်ရဲ့ကိုယ်အနေဟန်ထား၊ အသွင်အပြင်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့လည်း အကျိုးပေးကွာခြားတယ်လို့ ဆိုကြပါတယ်။ ဥပမာ – ဆင်နှာမောင်းကအပေါ်မြှောက်နေတဲ့ပုံစံဆိုရင်ကံကောင်းခြင်းတွေဖိတ်ခေါ်တဲ့သဘောမျိုးဆောင်ပါတယ်။
အိုင်းရစ်ခ်ျလူမျိုးတွေရဲ့အယူအဆမှာ မြင်းခွာကိုကံကောင်းခြင်းအဖြစ် သတ် မှတ်ကြပါတယ်။အချို့ကလည်းမြင်းခွာဟာမကောင်းဆိုးဝါးရန်ကကာကွယ်ပေးတယ်လို့ ဆိုကြပါတယ်။အိမ်ရှေ့တံခါး ပေါက်ရဲ့အပေါ်မှာသံမြင်းခွာကိုထားခြင်းကအိမ်ကိုအကာအကွယ်ဖြစ်စေပါတယ်။
တရုတ်ဓလေ့ထုံးစံအချို့မှာလိပ်သင်္ကေ တဟာအိမ်ရဲ့အစောင့်အရှောက်ဖြစ်တယ်လို့ယုံကြည်ထားကြပါတယ်။ပြောရမယ်ဆိုရင်လိပ်ဟာတရုတ် Feng Shui ဂိုဏ်းတွေရဲ့အစောင့်အရှောက်တွေထဲက တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။လိပ်ကို ခွန်အားကြီးမားတဲ့ သင်္ကေတအဖြစ်သတ်မှတ်ထားကြတာပါ။လိပ်အစစ်ဖြစ်စေ၊ အတုဖြစ်စေအိမ်ရဲ့ ရှေ့တံခါး၊ နောက်တံခါးတွေမှာထားခြင်းကအိမ်ကိုအညံ့တွေက ကာကွယ်ပေးပြီး၊ကံကောင်းခြင်းတွေကို ဝင်လာစေပါတယ်။
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းကနိုင်ငံအတော်များများရဲ့ ဓလေ့ထုံးစံမှာအနီကိုကံကောင်းစေတဲ့အရောင်အဖြစ်သတ်မှတ်ထားကြပါတယ်။တရုတ်နှစ်သစ်ကူးဆိုရင အနီရောင်တွေနဲ့အလှဆင်ကြပြီးအန်ဘောင်းကိုလည်းအနီရောင်အိတ်နဲ့ ထည့်ပေးကြပါတယ်။အိန္ဒိယမှာလည်းမင်္ဂလာပွဲဆိုရင် သတို့သမီးတော်တော်များများဟာ သန့်စင်ခြင်းနဲ့ကံကောင်းခြင်းသင်္ကေတအဖြစ်အနီရောင်ဝတ်စုံကိုဝတ်ဆင်ကြပါတယ်။ဒါကြောင့်သင့်အိမ်မှာအနီရောင်ပန်းအိုး၊အနီရောင်ချိတ်၊အနီရောင်ကော်ဇောကိုထားခြင်းကကံကောင်းခြင်းတွေတိုးပွားစေနိုင်ပါတယ်။
ဝက်သင်္ကေတကိုကံကောင်းခြင်းအဖြစ် မှတ်ယူတာကဂျာမန်လူမျိုးတွေပါ။ဒီအယူကတော့ ဘာသာရေး အယူမဟုတ်ပါဘူး။သမိုင်းကြောင်းအယူပါ။အလယ် ခေတ်လောက်ကတည်းကဥရောပနိုင်ငံတွေမှာဝက်သင်္ကေတဟာချမ်းသာကြွယ်ဝခြင်းနဲ့ ကံကောင်းခြင်းအဆောင်အဖြစ်ယုံကြည်ထားကြတာပါ။ဝက်မွေးပြီဆိုရင်ချမ်းသာလာတော့မယ်ဆိုတဲ့ နိမိတ်ပါပဲတဲ့။အခြားသော ကျွဲ၊ နွား၊ ကြက်တွေနဲ့ စမ်းသပ်ကြည့်ပေမယ့် အလုပ်မဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။ဝက်ကသာ ကံကောင်းစေခဲ့တာကြောင့်ယနေ့တိုင် ဝက်သင်္ကေတာကို ကံကောင်းခြင်းအဖြစ် သတ်မှတ်ထားကြတာပါ။
စကင်ဒနေဗီးယားနိင်ငံတွေမှာ ဝက် သစ်ချသီးတွေကိုပန်းကန်လုံးထဲထည့်ပြီး (သို့မဟုတ်)ပြတင်းပေါက်မှာချိတ်ဆွဲပြီး အလှဆင်တာကအိမ်ကိုအကာအကွယ်ဖြစ်စေတယ်လို့ယုံကြည်ကြပါတယ်။ သင်လည်းကံကောင်းချင်တယ်ဆိုရင်တော့အိမ်မှာဝက်သစ်ချသီးတွေနဲ့အလှဆင်ထားလိုက်ပါ။
ဓမ်မာ–သောက–အငျးဝ ရာဇာအိမျထောငျ ဘကျမြားအတှကျဗဟုသုတ
ဗဒေငျဆရာဘ၀အတှအေ့ကွုံမြားထဲတှငျအိမျထောငျရေးကိစ်စမြားအမြားဆုံး ကွုံတှရေ့တတျ၏။ရှအေ့ခါတုနျးကဆရာသမားမြားကဗဒေငျဆရာမြားဗဒေငျကိနျးဂဏနျးမြားတှငျအသုံးပွုရနျအတှ ကျမှတျရလှယျကူစိမျ့သောငှာဓမ်မာသောကအငျးဝရာဇာအိမျ ထောငျဘကျအသကျမရှညျရာစသညျဖွငျ့လင်ျကာမြားစပ၍ သငျ ပေးထားခဲ့ကွပါတယျ။
ထိုလင်ျကာမြားကိုဗဒေငျပညာနှငျ့မနီးစပျသူမြားကယူ၍စနနှေငျ့ကွာသပတေး၊ သောကွာနှငျ့တနင်ျလာ၊တနင်ျဂနှနှေငျ့ဗုဒ်ဓ ဟူး ၊ရာဟုနှငျ့အင်ျဂါလကျမထပျကောငျး၊လကျထပျပါကအိမျထောငျသကျမရှညျ စသညျဖွငျ့ကောကျယူကွ၏။မညျသို့ဖွဈသညျမသိထိုအယူအဆသညျလူတျော တျောမြားမြားအထူးသတိထားကွသောအယူအဆတဈခုသို့ ရောကျသှား၏။
ထို့ကွောငျ့မကွာခနဆိုသလိုပငျဓမ်မာသောကအငျးဝရာဇာ အိမျထောငျပွုထားကွသောသူမြားကအိမျထောငျမမွဲ၊ ကှဲမညျကို စိုးရိမျသောကွောငျ့ ဗဒေငျလာမေးကွလရောလူတိုငျးကိုနားလညျ အောငျရှငျးပွရသညျမှာလညျးတျောတျောမြားမြားရှိခဲ့ပွီဖွဈလသေညျ။
မညျသို့ပငျဆိုစကောမူထိုကဲ့သို့စနနှေငျ့ကွာသပတေး ၊သောကွာနှငျ့ တနင်ျလာ ၊တနင်ျဂနှနှေငျ့ ဗုဒ်ဓဟူး ၊ရာဟုနှငျ့အင်ျဂါ အိမျထောငျပွုထားကွသူမြားအတှကျ အိမျထောငျရေး အညံ့အချိုကျ ကငျးဝေးစသောနညျးတဈခုကို ပွနျလညျတငျပွပေးလိုကျရပါတယျဗြာ
စနသေားသမီးနှငျ့ကွာသပတေးသားဘသမီးအိမျထောငျပွုထားသူမြားအနနှေငျ့ ပိတောကျသားကို (၁၂)လကျမအလြား ဖွတျပါ။ သဈသားခြောငျးနှဈခြောငျးဖွတျပါ။ ထိုသဈသားခြောငျးနှဈခြောငျးကိုရှခေပြါ။ထိပျအသီးသီး၌ ဖဲကွိုးနီနှငျ့ ရဈပတျကာ လငျမယားနှဈဦးနသေောနရော၏အမွငျ့တဈနရောတှငျ ခြိတျဆှဲထားပါ။
သောကွာသားသမီးနှငျ့တနင်ျလာသား သမီး အိမျထောငျပွုထားပါက ရနျဓာတျပယျြစရေနျကသဈသားကို (၈)လကျမ အလြားဖွတျပါ။သဈသားခြောငျးနှဈခြောငျးဖွတျပါ။ထိုသဈသားခြောငျးနှဈခြောငျးကို ရှခေပြါ။ထိပျအသီးသီး၌ ဖဲကွိုးအဝါနှငျ့ ရဈပတျကာ လငျမယားနှဈဦးနသေောနရော၏ အမွငျ့တဈနရောတှငျ ခြိတျဆှဲထားပါ။
တနင်ျဂနှသေားသမီးနှငျ့ဗုဒ်ဓဟူးသားသမီး အိမျထောငျပွုထားသူမြား ဝငျအူသားကို (၅)လကျမအလြားဖွတျပါ။သဈသားခြောငျး နှဈခြောငျးဖွတျပါ။ထိုသဈသားခြောငျးနှဈခြောငျးကို ရှခေပြါ။ ထိပျအသီးသီး၌ အပွာရငျ့ရောငျ ဖဲကွိုးနှငျ့ ရဈပတျကာ လငျမယားနှဈဦးနသေော နရော၏ အမွငျ့တဈနရောတှငျ ခြိတျဆှဲထားပါ။
ရာဟုနှငျ့ အင်ျဂါသားသမီး ဇနီးမောငျနှံမြားအတှကျစောငျးလြှားသားကို (၁၁)လကျမ အလြားဖွတျပါ။သဈသားခြောငျး နှဈခြောငျးဖွတျပါ။ ထိုသဈသားခြျေားနှဈခြောငျးကို ရှခေပြါ။ ထိပျအသီးသီး၌ဖဲကွိုးအစိမျးရောငျနှငျ့ရဈပတျကာလငျမယားနှဈဦးနသေောနရော၏အမွငျ့တဈနရောတှငျခြိတျဆှဲထားပါ။ထိုကဲ့သို့ ခြိတျဆှဲရာတှငျအောကျဖျောပွပါအခြိနျအတိအကလြိုကျနာခြိတျဆှဲပါက ပိုမို၍အကြိုးပေးကောငျးမှနျမညျ ဖွဈပါတယျ။
ရာဇာဇနီးမောငျနှံမြား – အင်ျဂါနေ့ (၉)နာရီ (၉)မိနဈတှငျ ခတျြဆှဲပါ
ဓမ္မာ–သောက–အင်းဝ ရာဇာအိမ်ထောင် ဘက်များအတွက်ဗဟုသုတ
ဗေဒင်ဆရာဘ၀အတွေ့အကြုံများထဲတွင်အိမ်ထောင်ရေးကိစ္စများအများဆုံး ကြုံတွေ့ရတတ်၏။ရှေ့အခါတုန်းကဆရာသမားများကဗေဒင်ဆရာများဗေဒင်ကိန်းဂဏန်းများတွင်အသုံးပြုရန်အတွ က်မှတ်ရလွယ်ကူစိမ့်သောငှာဓမ္မာသောကအင်းဝရာဇာအိမ် ထောင်ဘက်အသက်မရှည်ရာစသည်ဖြင့်လင်္ကာများစပ၍ သင် ပေးထားခဲ့ကြပါတယ်။
ထိုလင်္ကာများကိုဗေဒင်ပညာနှင့်မနီးစပ်သူများကယူ၍စနေနှင့်ကြာသပတေး၊ သောကြာနှင့်တနင်္လာ၊တနင်္ဂနွေနှင့်ဗုဒ္ဓ ဟူး ၊ရာဟုနှင့်အင်္ဂါလက်မထပ်ကောင်း၊လက်ထပ်ပါကအိမ်ထောင်သက်မရှည် စသည်ဖြင့်ကောက်ယူကြ၏။မည်သို့ဖြစ်သည်မသိထိုအယူအဆသည်လူတော် တော်များများအထူးသတိထားကြသောအယူအဆတစ်ခုသို့ ရောက်သွား၏။
ထို့ကြောင့်မကြာခနဆိုသလိုပင်ဓမ္မာသောကအင်းဝရာဇာ အိမ်ထောင်ပြုထားကြသောသူများကအိမ်ထောင်မမြဲ၊ ကွဲမည်ကို စိုးရိမ်သောကြောင့် ဗေဒင်လာမေးကြလေရာလူတိုင်းကိုနားလည် အောင်ရှင်းပြရသည်မှာလည်းတော်တော်များများရှိခဲ့ပြီဖြစ်လေသည်။
မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူထိုကဲ့သို့စနေနှင့်ကြာသပတေး ၊သောကြာနှင့် တနင်္လာ ၊တနင်္ဂနွေနှင့် ဗုဒ္ဓဟူး ၊ရာဟုနှင့်အင်္ဂါ အိမ်ထောင်ပြုထားကြသူများအတွက် အိမ်ထောင်ရေး အညံ့အခ်ိုက် ကင်းဝေးစေသာနည်းတစ်ခုကို ပြန်လည်တင်ပြပေးလိုက်ရပါတယ်ဗျာ
စနေသားသမီးနှင့်ကြာသပတေးသားဘသမီးအိမ်ထောင်ပြုထားသူများအနေနှင့် ပိတောက်သားကို (၁၂)လက်မအလျား ဖြတ်ပါ။ သစ်သားချောင်းနှစ်ချောင်းဖြတ်ပါ။ ထိုသစ်သားချောင်းနှစ်ချောင်းကိုရွှေချပါ။ထိပ်အသီးသီး၌ ဖဲကြိုးနီနှင့် ရစ်ပတ်ကာ လင်မယားနှစ်ဦးနေသောနေရာ၏အမြင့်တစ်နေရာတွင် ချိတ်ဆွဲထားပါ။
သောကြာသားသမီးနှင့်တနင်္လာသား သမီး အိမ်ထောင်ပြုထားပါက ရန်ဓာတ်ပျယ်စေရန်ကသစ်သားကို (၈)လက်မ အလျားဖြတ်ပါ။သစ်သားချောင်းနှစ်ချောင်းဖြတ်ပါ။ထိုသစ်သားချောင်းနှစ်ချောင်းကို ရွှေချပါ။ထိပ်အသီးသီး၌ ဖဲကြိုးအဝါနှင့် ရစ်ပတ်ကာ လင်မယားနှစ်ဦးနေသောနေရာ၏ အမြင့်တစ်နေရာတွင် ချိတ်ဆွဲထားပါ။
တနင်္ဂနွေသားသမီးနှင့်ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီး အိမ်ထောင်ပြုထားသူများ ဝင်အူသားကို (၅)လက်မအလျားဖြတ်ပါ။သစ်သားချောင်း နှစ်ချောင်းဖြတ်ပါ။ထိုသစ်သားချောင်းနှစ်ချောင်းကို ရွှေချပါ။ ထိပ်အသီးသီး၌ အပြာရင့်ရောင် ဖဲကြိုးနှင့် ရစ်ပတ်ကာ လင်မယားနှစ်ဦးနေသော နေရာ၏ အမြင့်တစ်နေရာတွင် ချိတ်ဆွဲထားပါ။
ရာဟုနှင့် အင်္ဂါသားသမီး ဇနီးမောင်နှံများအတွက်စောင်းလျှားသားကို (၁၁)လက်မ အလျားဖြတ်ပါ။သစ်သားချောင်း နှစ်ချောင်းဖြတ်ပါ။ ထိုသစ်သားချော်းနှစ်ချောင်းကို ရွှေချပါ။ ထိပ်အသီးသီး၌ဖဲကြိုးအစိမ်းရောင်နှင့်ရစ်ပတ်ကာလင်မယားနှစ်ဦးနေသောနေရာ၏အမြင့်တစ်နေရာတွင်ချိတ်ဆွဲထားပါ။ထိုကဲ့သို့ ချိတ်ဆွဲရာတွင်အောက်ဖော်ပြပါအချိန်အတိအကျလိုက်နာချိတ်ဆွဲပါက ပိုမို၍အကျိုးပေးကောင်းမွန်မည် ဖြစ်ပါတယ်။
ဓမ္မာဇနီးမောင်နှံများ – တနင်္ဂနွေနေ့ နေ့လည် (၁၁) နာရီ(၄၅)မိနစ်တွင် ချိတ်ဆွဲပါ။
သောကဇနီးမောင်နှံများ – တနင်္လာနေ့ နံက်(၆)နာရီ မိနစ်(၂၀)တွင် ချိတ်ဆွဲပါ။
အင်းဝဇနီးမောင်နှံများ – ဗုဒ္ဓူးနေ့ မွန်းလွဲ (၁)နာရီ (၄၅)မိနစ်တွင် ချိတ်ဆွဲပါ။
ရာဇာဇနီးမောင်နှံများ – အင်္ဂါနေ့ (၉)နာရီ (၉)မိနစ်တွင် ချတ်ဆွဲပါ